9 Ịlaịsha onye amụma wee kpọọ otu n’ime ụmụ+ ndị amụma, sị ya: “Kee ájị̀ n’úkwù+ ma were karama+ mmanụ a gaa Remọt-gilied.+
2 Mgbe ị banyere n’ebe ahụ, hụ Jihu+ nwa Jehọshafat bụ́ nwa Nimshaị n’ebe ahụ; banye mee ka o bilie n’etiti ụmụnna ya ma kpọba ya n’ọnụ ụlọ dị n’ime ime.+
3 Were karama mmanụ ahụ wụọ ya mmanụ n’isi,+ kwuokwa, sị, ‘Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Ana m ete gị mmanụ+ ịbụ eze+ Izrel.”’ Megheekwa ụzọ gbapụ, egbula oge.”
4 Onye ahụ na-eje ozi, nke na-ejere onye amụma ozi, wee gawa Remọt-gilied.
5 Mgbe ọ batara, lee, ndị isi ndị agha nọ ọdụ n’ebe ahụ. O wee sị: “Onyeisi, ọ dị ihe m chọrọ ịgwa gị.”+ Jihu wee sị: “Olee onye ọ bụ n’ime anyị niile?” O wee sị: “Onyeisi, ọ bụ gị.”
6 O wee bilie bata n’ime ụlọ; o wee wụsa mmanụ ahụ n’isi ya, sị ya: “Nke a bụ ihe Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru, ‘Ana m ete gị mmanụ ịbụ eze+ ndị Jehova,+ ya bụ, Izrel.
7 Gbuo ezinụlọ Ehab onyenwe gị, n’ahụ́ Jezibel+ ka m ga-abọ ọbọ+ ọbara ndị ohu m bụ́ ndị amụma nakwa ọbara ndị ohu Jehova niile.
8 Ụlọ Ehab dum ga-alakwa n’iyi; m ga-ebipụkwa onye ọ bụla bụ́ nwoke+ nke si n’ahụ́ Ehab+ na onye ọ bụla na-enweghị enyemaka na onye na-abaghị n’ihe+ n’Izrel.
9 M ga-emekwa ka ụlọ Ehab dịrị ka ụlọ Jeroboam+ nwa Nibat nakwa dị ka ụlọ Beasha+ nwa Ahaịja.
10 Nkịta ga-erichapụkwa Jezibel+ n’ibé ala dị na Jezril, ọ dịghịkwa onye ga-eli ya.’” O wee meghee ụzọ gbapụ.+
11 Ma Jihu pụkwuuru ndị na-ejere onyenwe ya ozi, ha malitere ịsị ya: “Ọ̀ dịkwa mma?+ Gịnị mere onye ara+ a ji bịakwute gị?” Ma ọ sịrị ha: “Unu maara nwoke ahụ nke ọma, marakwa otú o si ekwu okwu.”
12 Ma ha sịrị: “Ọ bụ ụgha! Biko, gwa anyị.” O wee sị: “Lekwa lekwa ihe ọ gwara m, sị, ‘Nke a bụ ihe Jehova kwuru: “Ana m ete gị mmanụ ịbụ eze Izrel.”’”+
13 Onye ọ bụla n’ime ha wee mee ọsọ ọsọ chịrị uwe+ ya wụsa n’ebe ọ ga-azọkwasị ụkwụ n’ebe e si arịgo n’ebe ahụ, ha wee malite ịfụ opi,+ sị: “Jihu aghọwo eze!”+
14 Jihu+ nwa Jehọshafat nwa Nimshaị+ wee gbaara Jehoram izu.+
Jehoram nọ na-eche nche na Remọt-gilied,+ ya na Izrel dum, n’ihi Hazel+ eze Siria.
15 E mesịa, Jehoram+ bụ́ eze laghachiri Jezril+ ka a gwọọ ya ahụ́ ndị Siria merụrụ ya mgbe o busoro Hazel eze Siria agha.+
Jihu wee sị: “Ọ bụrụ na mkpụrụ obi unu ekwe,+ unu ekwela ka onye ọ bụla gbapụ n’obodo a ịga Jezril kọọ ihe merenụ.”
16 Jihu wee gbara ụgbọ ịnyịnya ya gawa Jezril; n’ihi na Jehoram dina n’ebe ahụ, Ehazaya+ bụ́ eze Juda agawokwa ebe ahụ ịhụ Jehoram.
17 Onye nche+ guzokwa n’ụlọ nche+ dị na Jezril,+ o wee hụ ìgwè ndị ikom na-awụ ọsọ, bụ́ ndị so Jihu na-abịa, o wee sị ozugbo: “Ana m ahụ ìgwè ndị ikom na-awụ ọsọ.” Jehoram wee sị: “Kpọọ onye agha na-agba ịnyịnya, ziga ya ka ọ gaa zute ha, ka ọ jụọkwa ha, ‘Udo ọ̀ dịkwa?’”+
18 Onye na-agba ịnyịnya wee gaa zute ya, sị: “Eze sịrị m jụọ gị, ‘Udo ọ̀ dịkwa?’” Ma Jihu sịrị: “Gịnị jikọrọ gị na ‘udo’?+ Gafee m n’azụ!”
Onye nche+ ahụ wee gaa n’ihu ịkọ, sị: “Onye ozi ahụ garuru ebe ha nọ, ma ọ lọghachibeghị.”
19 O wee zipụ onye nke abụọ na-agba ịnyịnya, bụ́ onye kwuru mgbe ọ bịakwutere ha, sị: “Eze sịrị m jụọ gị, ‘Udo ọ̀ dịkwa?’” Ma Jihu sịrị: “Gịnị jikọrọ gị na ‘udo’?+ Gafee m n’azụ!”
20 Onye nche wee gaa n’ihu ịkọ, sị: “Ọ garuru ebe ha nọ, ma ọ lọghachibeghị; otú o si agba ịnyịnya dị ka otú Jihu+ nwa nwa Nimshaị+ si agba, n’ihi na ọ na-agba ịnyịnya ara ara.”+
21 Jehoram wee sị: “Kwadebe ụgbọ ịnyịnya m!”+ E wee kwadebe ụgbọ ịnyịnya agha ya, Jehoram eze Izrel na Ehazaya+ eze Juda wee pụwa, onye nke ọ bụla nọ n’ụgbọ ịnyịnya agha ya. Ka ha nọ na-aga izute Jihu, ha hụrụ ya n’ibé ala Nebọt+ onye Jezril.
22 O wee ruo na ngwa ngwa Jehoram hụrụ Jihu, o kwuru ozugbo, sị: “Jihu, udo ọ̀ dịkwa?” Ma ọ sịrị: “Olee otú udo+ ga-esi dị ebe ọ bụ na nne gị Jezibel+ na-akwa iko ma na-agba afa nke ukwuu?”+
23 Jehoram tụgharịrị aka ya ozugbo ka ọ gbaa ọsọ, o wee sị Ehazaya: “Ehazaya, aghụghọ abatala n’ihe a!”+
24 Jihu wee were ụta+ gbaa Jehoram n’agbata ogwe aka ya abụọ, akụ́ ahụ wee pụta n’ihu obi ya, o wee daa n’ụgbọ ịnyịnya agha ya.+
25 O wee sị Bidka bụ́ osote ya:+ “Bulite ya; tụba ya n’ibé ala Nebọt onye Jezril;+ n’ihi na cheta: Mụ na gị so n’ìgwè ndị ji ụgbọ ịnyịnya na-eso Ehab nna ya n’azụ, Jehova kwukwara okwu+ a megide ya, sị:
26 ‘“N’ezie, ahụrụ m ọbara Nebọt+ na ọbara ụmụ+ ya ụnyaahụ,” ka Jehova kwuru, “m ga-akwụ gị ụgwọ+ n’ibé ala a,” ka Jehova kwuru.’ N’ihi ya, bulite ya; tụba ya n’ibé ala ahụ dị ka Jehova kwuru.”+
27 Ehazaya+ eze Juda hụrụ ihe merenụ wee si n’ụzọ e si aga n’ụlọ ubi gbaa ọsọ.+ (E mesịa, Jihu chụwara ya wee sị: “Ma onye nke a! Gbatuonụ ya!” Ha wee gbatuo ya mgbe ọ nọ n’ụgbọ ịnyịnya na-agbago Gọọ, nke dị n’akụkụ Ibliam.+ O wee gbagide ruo Megido+ ma nwụọ n’ebe ahụ.+
28 Ndị na-ejere ya ozi wee buru ya n’ụgbọ ịnyịnya gaa Jeruselem, ha wee lie ya n’ili ya n’ebe e liri nna nna ya hà n’Obodo Devid.+
29 Ọ bụ n’afọ nke iri na otu nke ọchịchị Jehoram+ nwa Ehab ka Ehazaya+ ghọrọ eze Juda.)
30 N’ikpeazụ, Jihu bịara na Jezril,+ Jezibel+ nụkwara ya. O wee were uri anya tee+ n’anya ya ma chịkọta ntutu isi ya nke ọma+ wee si na windo na-eleda anya.+
31 Jihu wee si n’ọnụ ụzọ ámá bata. Jezibel wee sị: “Ihe ọ̀ gaziiri Zimraị,+ bụ́ onye gburu onyenwe ya?”
32 Jihu wee welie ihu ya lee windo ahụ, sị: “Ònye dịnyeere m? Ònye?”+ Ozugbo ahụ, mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ ndị na-eje ozi n’obí eze+ ledatara anya n’ebe ọ nọ.
33 O wee sị: “Tụdatanụ ya!”+ Ha wee tụda ya, ọbara ya wee fesa n’ahụ́ ụlọ ahụ nakwa n’ahụ́ ịnyịnya ndị ahụ; o wee jiri ịnyịnya ya rịa ya elu.+
34 E mesịa, ọ batara wee rie ihe ma ṅụọ ihe ọṅụṅụ wee sị: “Bikonụ, lebaranụ onye a a bụrụ ọnụ+ anya ma lie ya, n’ihi na ọ bụ ada eze.”+
35 Mgbe ha gara ili ya, ọ dịghị akụkụ ahụ́ ya ha hụrụ ma e wezụga okpokoro isi ya na ụkwụ na ọbụ aka ya.+
36 Mgbe ha lọghachiri kọọrọ ya, ọ sịrị: “Ọ bụ okwu ahụ Jehova kwuru site n’ọnụ+ ohu ya bụ́ Ịlaịja onye Tishbe, sị, ‘N’ibé ala dị na Jezril ka nkịta ga-eri anụ Jezibel.+
37 Ozu Jezibel ga-adịkwa ka nsị anụ+ n’ihu ubi ahụ dị n’ibé ala nke dị na Jezril, ka ha ghara ịsị: “Lekwa Jezibel.”’”+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D12%26Chapter%3D9%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl